ဘဝမှတ်တိုင်: WiFi ရဲ့ အမြန်နှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးမယ့် WIFI Optimizer PRO Apk v6.0
WiFi ရဲ့ အမြန်နှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးမယ့် WIFI Optimizer PRO Apk v6.0
WIFI Optimizer PRO ကတော့ Android OS သုံး app ဖြစ်ပြီး Wifi ရဲ့ ဖမ်းယူနှုန်းကို မြှင့်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်.. Android 2.1 နဲ့အထက်တွေမှာ သုံးနိုင်ပါတယ်..
WIFI Optimizer PRO helps you avoid conflicts with other WIFI networks and optimize network performance.
nalyzes and displaysalist of all WiFi networks detected.
-We have added the 6.0 WIFIPOINTS allowing you to seeareview of the WIFI network based on the received signal, channel and security level used. Achieve 10 WIFIPOINTS for your WIFI network!
Download လုပ်နည်းများမသိပါက ဒီမှာဖတ်ပေးပါ...ညီအစ်ကိုမောင်နှမမတွေအတွက် အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် Download Link ရဲ့ အပေါ်ဆုံးမှာထည့်ထားသော ကြော်ငြာ Banner နှစ်ခုကိုပြန်ခါနီး တစ်ချက်လောက် Click ပေးသွားကြပါဦးနော်..ဖုန်းအင်တာနက်သုံးပြီး ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ဖုန်းအင်တာနက်ဖိုးလေးပြန်ရဖို့အတွက် ကြော်ငြာထည့်ထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်ခင်ဗျာ
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 5/13/2014 10:46:00 am